ဘက်စုံသုံး အလှကုန် စက်များ ထုတ်လုပ်သူ |China Multifunctional Beauty Machines Suppliers & Factory
အရောင်းရဆုံး Diode Laser+ND YAG+980nm3Handles Multifunction Laser Tattoo Removal Beauty Machine for Salon Clinic
Stelle Laser သည် နိုင်ငံတကာ R&D ဦးဆောင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် အလှအပဆိုင်ရာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ သုံးစွဲသူများအား အဆင့်မြင့်စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်ရန် ကတိပြုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အလှအပစောင့်ရှောက်မှုနယ်ပယ်တွင် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်များစွာကို သုတေသနပြု၍ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ထုတ်ကုန်လိုင်းသည် IPL၊ Elight စနစ်၊ SHR အမြန်ဆံပင်ဖယ်ရှားခြင်းစနစ်၊ 808nm အေးခဲနေသောဆံပင်ဖယ်ရှားရေးစနစ်၊ Q-witch 1064nm/532nm လေဆာစနစ်တို့ပါရှိသော အရောင်းရဆုံးထုတ်ကုန်များကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှုမြင့်မားသော အာထရာဆောင်း ပိန်စနစ်။
လက်ရှိတွင်၊ ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံစက်ရုံတွင် madediode + Nd Yag + Elight + RF + laser 980nm တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထူးခြားသည်- 1. ကျွန်ုပ်တို့သာလျှင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အစိတ်အပိုင်းများ အချက်ပေးစနစ်ကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။ဖြန့်ဖြူးသူကြီးများအတွက် အလွန်အကျိုးရှိပါတယ်။ဘယ်လိုင်းက အဝါရောင်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုသာ ပြောပြလိုက်ရင် စက်ရဲ့ပြဿနာကို သိပါလိမ့်မယ်။2. သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အငှားစနစ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
STELLLE လေဆာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Diode လေဆာ+ND YAG +980nm ဘက်စုံသုံး လေဆာတက်တူး ဖယ်ရှားရေး အလှပြင်စက်
အရောင်းရဆုံး 808nm Diode Laser IPL SHR SSR E-light Beauty Equipment ဆေးခန်းအတွက် နာကျင်မှု အခမဲ့ အမြဲတမ်း လေဆာဆံပင် ဖယ်ရှားရေးစက်